Cayaartoy katimid Melbourne oo Garoowe gaaray [Sawirro]
GAROOWE, Puntland- Kooxaha kubadda cagta iyo dhalinyarada Magaalada Garoowe ayaa soo dhaweyn u sameeyay Cayaartoy katimid waddanka Australia gaar ahaan magaalada Melbourne kuwaasoo socod ku marayay dalka Soomaaliya.
Dhalinyarada oo sannadkii 2aad booqanaya Puntland ayaa socdaal dhinac lugta ah kusoo maray Boosaaso ilaa Garoowe, waxayna kusoo hakadeen magaalada Qardho oo ay saaka kasoo amba baxeen.
Waxaa la filayaa inay cayaar kubadda cagta ah isaga hor yimaadaan Galabt Sabtida Kooxda Horseed ee ciidamada Qalabka sida ee Puntland.
Dhalinyarada magaalada Garoowe oo qaatay doorkii soo dhaweynta wasaaradda Dhalinyarada iyo Cayaaraha Puntland, ayaa Kooxdan casho soo dhaweyn ah kula qaatay gudaha magaalada.
Mudadii lagu guda jiray soo dhaweynta kooxdan ma jirin cid katirsan dowladda oo u timid ama ka dhex-muuqatay markii ay soo gaareen Garoowe, balse magaalooyinkii kale sida Qardho iyo Boosaaso waxaa hormuud u ahaa maamulka magaalooyinka iyo gobolladii ay tageen.
Lama oga sababta keentay in doorkii dowladda uu maqnaado, inkastoo sannadkii hore si wanaagsan loogu maamusay Puntland gaar ahaan Garoowe iyo Eyl oo ahayd goobta kaliya ee ay booqdeen.
Guddoomiyaha kooxda ayaa sheegay inuu bogaadinayo sida sharafta leh ee dadka reer Garoowe markii 2aad usoo dhaweynayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee matalaysa Melbourne.
Qaar kamid ah maamulka Kooxdan oo la hadlay Warsidaha Garowe Online, ayaa sheegay in booqashadan Dhalinyaradan ee magaalada Garoowe ay qaadan doonto hal maalin islamarkaana ay usii safri doonaan dhinaca Somaliland.
Bandhig Carwo Shaqo oo Garowe laga furay [Sawirro]
Puntland 28.03.2018. 10:50
Gaas oo ka jawaabay hadal uu ka yiri Imaaraadka [Dhagayso]
Puntland 05.05.2018. 17:36
Puntland: TPEC oo kordhiyay waqtiga furashada ururada Siyaasadda
Puntland 15.10.2017. 10:16